“အင်ဂျင်နီယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များ ၏အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . | Crown Education
HomeCrownAbout UsCROWN’S AWARDSStudent TestimonialsServicesUniversitiesStudy in HOLLANDStudy in MALAYSIAStudy in AUSTRALIAPre MASTERSStudy in UKStudy in USAStudy in SingaporeStudy in NEW ZEALANDGUIDE TO UK UNIVERSITIESStudy in THAILANDUseful InfoUnaccredited InstitutionsPathway ProgramsGlobal Assessment CertificateNCUK International Year OneGAC Pathway UniversitiesGAC in MyanmarNewsGalleryPhoto GalleryContact UsEDU EXHIBITION 2017FAQs “အင်ဂျင်နီယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များ ၏အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ .
ဆွေးနွေးပွဲမှာ-❑ အခုခေတ်နည်းပညာပိုင်းတွေမှာအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ ပေါင်းစပ်အသုံးချမလဲ❑စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းသင်ယူအသုံးချတတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အတွက် အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရနိုင်မလဲ❑ အောင်မြင်တဲ့ Engineering Manager တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စီမံ ခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များ❑ Coventry University မှပေးအပ်မယ့်MSc in Engineering Business Managementအကြောင်းတွေနဲ့.....စီမံခန့်ခွဲမှုပညာများကိုအချိန်တိုအတွင်းတက်ရောက်သင်ယူလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှဘွဲ့ရများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ CoventryUniversity မှပေးအပ်မယ့် Master of Science in EngineeringBusiness Management ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီကိုစကာင်္ပူ Psb Academyတွင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။.စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။.ဆွေးနွေးမည့်သူ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■Dr. Tan Boon LeingAcademic Director, School of Postgraduate StudiesPsb Academy, Singapore.ရန်ကုန်မြို့ ဆွေးနွေးပွဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ နေ့ရက် - ဖေဖော်ဝါရီ (၂၅) ၊ စနေနေ့။❑ အချိန် - နေ့လည် (၂) နာရီမှ (၄) နာရီထိ❑ နေရာ - Yadana3Ballroom, Park Royal Hotelမှာဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။.ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပက်သက်၍အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■CROWN Education (Yangon)အမှတ်(၂၇ဝ)၊မြေညီထပ်၊ မြေနီကုန်း၊ ပြည်လမ်း ၊☎ ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊☎ ဝ၉- ၄၅၀-၀၁၀-၀၂၀၊☎ ၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်၊၊.CROWN Education (Mandalay)အခန်း၊ (၁၁၉)၊ Hotel Mandalay၊အမှတ် ၆၅၂၊၇၈ လမ်း၊ ၃၇ လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား၊ ဖုန်း☎ ၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈၊☎ ၀၉ ၄၅၀ ၂၀၀ ၀၈၀☎ ဝ၂-၇၁၅၈၂ ၊ လိုင်းခွဲ ၁၁၉ တို့တွင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။